နာမည်ကျော်ကြား wordpress plugin များ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်) > Web Technology > Portal/Forum/Blog/CMS > နာမည်ကျော်ကြား wordpress plugin များ
View Full Version : နာမည်ကျော်ကြား wordpress plugin များ
နာမည်ကျော်ကြား wordpress plugin များ
Plugin များဟာ wordpress မှာ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ သုံးဖူးသူတိုင်းသိကျမှာပါ ... အခုတင်ပြမှာက ကျွန်တော်သိသလောက် plugin များကို တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် ...
ဒါကတော့ လူတိုင်းသိကျမှာပါ .. wordpress တစ်ခုဖန်တီးပြီးတာနဲ့ default အားဖြင့်ပါတဲ့ plugin ပါ ...
Akismet ဟာ ကော်မန့် တွေကို spam လား၊ အမှန်အကန်လားဆိုတာ စစ်ဆေးပေးပါတယ် .. ကျွန်တော့်ဘလော့ဆို ဘယ်နိုင်ငံကမှန်းမသိခဏခဏ ကော်မန့် လာပေးပါတယ် .. ရေးထားတာတွေလဲ နားမလည်ပါဘူး ။ ဒါမျိုးတွေကျရင် Akismet ကတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ် ...
All in One SEO Pack (http://semperfiwebdesign.com/)
SEO ဆိုတာ Search Engine Optimization ဆိုတဲ့ ရှာဖွေရေးပါ .. မိမိဘလော့ကို လူသိများအောင်ကြော်ငြာပေးတာပါ ...
Category Cloud Widget (http://leekelleher.com/wordpress/plugins/category-cloud-widget/)
ဒါကတော့ sidebar widget တွေကို tag cloud တွေနဲ့ ဖော်ပြပေးတဲ့ plugin ပါ ...
One Click Plugin Updater (http://w-shadow.com/blog/2007/10/19/one-click-plugin-updater/)
ဒါကတော့ plugin တွေကို upgrade လုပ်ဖို့ click တစ်ချက်နဲ့ တင်အဆင်ပြေပါတယ ...
Random Featured Post (http://www.mydollarplan.com/random-featured-post-plugin/)
ဒါကတော့ နာမည်အတိုင်း မိမိတင်ထားတဲ့ပို့စ်တွေကို ramdomly ဖော်ပြပေးတဲ့ plugin ပါ ..
Get Recent Comments (http://www.mydollarplan.com/random-featured-post-plugin/)
ဒါကတော့ recent comment တွေကို ဖော်ပြပေးတာပါ ..
Subscribe To Comments (http://txfx.net/code/wordpress/subscribe-to-comments/)
ဒါကတော့ ကော်မန့် တွေကို subscribe အနေနဲ့ ဖတ်ချင်ရင် သုံးတာပါ ..
Wordpress Automatic Upgrade (http://techie-buzz.com/wordpress-plugins/wordpress-automatic-upgrade-12-release.html)
ဒါကတော့ ဗာရှင်းအသစ်ပေါ်တိုင်း ဦးနှောက်စားစရာမလိုပဲ အော်တို upgrade လုပ်ပေးတဲ့ plugin လေးပါ .. အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ..
WP Super Cache (http://techie-buzz.com/wordpress-plugins/wordpress-automatic-upgrade-12-release.html)
ဒါကတော့ မြန်နှုန်းမြင့် plugin ပေါ့ .. မိမိဆိုက် cache လုပ်တာကို မြန်စေပါတယ် .. တစ်ကြိမ် enable ပေးရင် ပြိးပါပြီး ..
Youtube Brackets (http://www.robertbuzink.nl/journal/2006/11/23/youtube-brackets-wordpress-plugin/)
ဒါကတော့ မိမိဆိုက်မှာ YouTube က ဗီဒီယိုတွေတင်ချင်ရင် သုံးတဲ့ plugin ပါ ...
ဒါတွေကတော့ ကျနော်သိသလောက်မှတ်သလောက် plugin များပါပဲ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
databaseလစ်သွားလို့ညီပြန်လုပ်နေရတယ်အကို။ :&#039;( :&#039;( :&#039;(
ကိုရာမညကတော့ စုံပါပေတယ်ဗျာ... နောက်သိသင့်တာလေးတွေ ထပ်တင်ပေးပါအုန်းနော်..
ကျွန်တော်က wordpress ကိုသိပ်မသုံးဘူး ဘူးဗျ..။ အခု စာအုပ်စင်လေး လုပ်ချင်လို့ wordpress ကိုသုံးမလို့ mkportal ရဲ့ modules မှာထည့်ပြီး သုံးကြည့်နေတယ်...... လိုတာရှီ၇င် သိချင်ရင် မေးမယ်နော် ကူညီပါအုန်း.. ဘာတွေသိထားသင့်တယ် ဘာတွေ လုပ်သင့်ဆိုတာလေးကို ပြေပြပေးပါနော်.......
ကျွန်တော် wordpress မှာဖိုင်တွေတင်တဲ့အခါ သူ့ Admin tools ကနေပြီးတော့ တင်ရတာသိပ်အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာ။ သူက တစ်ခုချင်းဆီ upload လုပ်နေတော့ အရမ်းကြာနေတယ်။ အဲဒါ ftp နဲ့တင်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးများရှိမရှိ။ အခုတင်မယ့် စာအုပ်တွေက ၂၀၀ ကျော် ၃၀၀လောက် အဆင်သင့် ရှိနေတယ်။ အဲဒါအဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းလေး ပြောပြကြပါအုန်း။ ကျွန်တော် --/wordpress/wp-content/uploads မှာလည်း သွားတင်ကြည့်တယ် ဖိုင်ကတော့ ရောက်သွားတယ် ဒါပေမယ့် wordpress admin tools မှာ ဘာမှရောက်မလာဘူးခင်ဗျာ...
နောက်ပြီး file တွေ categories တွေ ကို ဘယ်လို ခွဲထားရင် စာဖတ်တဲ့သူ၊ ရှာချင်တဲ့သူ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလေးပါ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီဝေဖန်ပေးကြပါအုန်း ခင်ဗျာ။ စာဖတ်ဝါသနာရှင်တွေ အတွက် အတပ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
flash paper နဲ့ တင်မယ်ဆိုရင် လည်း ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမယ် ဆိုတာလေးပါ ပြောပြပေးကြပါနော်။
အောက်က လင့်လေးမှာ လာရောက်ကြည့်ရှု့ဝေဖန်ပေးကြပါအုန်း...
coconut (Can&#039;t Catch Group.)
ကို Mu_Si ရေ ...
ftp နဲ့ ဖိုင်တွေကို တင်တာ ကျနော်စမ်းတာ ရပါတယ် .. admin tool မှာတော့ မပေါ်ဘူးပေါ့နော် ..
ဒါပေမဲ့ တင်ထားတဲ့ဖိုင် address ကိုညွှန်းရင်တော့ ရတယ်ဗျ ...
ftp နဲ့ ဖိုင်တင် ၊ ပြီးရင် အဲဒီလင့်ကို ပေးလိုက်ပေါ့ ...
ဖိုင်တစ်ဖိုင်တော့ အရင်တင်ကြည့်ပေါ့ .. ပြီးမှအဲဒီဖိုင်ရှိတဲ့ ဖိုဒါထဲကို ထည့်ပေါ့ .. ကျနော်စမ်းတာတော့ရပါတယ်..
http://phoepyae.co.cc/wp-content/uploads/2008/10/100-tips-from-myanmar-movie1.pdf ဒါဆိုရင် wp-content/uploads/2008/10 ထဲကိုပဲ ဖိုင်တွေထည့်လိုက်တာ ..
ပြီးရင် မိမိထည့်ထားတဲ့ဖိုင် address ကိုထပ်ဖြည့်လိုက်ပေါ့ ..
အခုဖြစ်နေတာက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်ထားတာကို အားမရဘူး ဖြစ်နေတာ.. ဘယ်လိုပုံစံ ပိုစ့်တွေ တင်ရမလည်း ဘယ်လို ကတ်တလောက်တွေ ထားရမလည်း ဆိုတာပါ အကြံပေးပါအုန်းနော်.. အစ်ကိုပြောတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ကျွန်တော် ထပ်လုပ်ကြည့်ပါအုန်းမယ်.....
Wordpress Plugin - Warning Before Closing
Wordpress အတွက် plugin လေးတစ်ခုပါ။ကိုယ့်ရဲ့ဘလော့ကိုလာကြည့်တဲ့သူဟာစာတွေဖတ်ပြီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်.ပိတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
မပိတ်ခင် မေးတဲ့ plugin လေးတစ်ခုပါ။ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ယူထားလိုက်ဗျာ..
ကိုရာမညရေးထားတဲ့ plugin တွေကဒေါင်းလော့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အစ်ကိုရေ ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲနော် နည်းနည်း ပြန်စစ်ပေးကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ :( :( :(
ညီလေးရေ .. အကိုအားလုံးပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် ...
Wordpress မှာ Photo တွေ တင်မယ်။လှလှလေးနဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေ နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်
ပေးတာလေးနဲ့သုံးကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။အရင်ဆုံး http://www.picturetrail.com မှာ account တစ်ခုလုပ်ပါမယ်။
အကောင့်ရရှိပါက sing in ၀င်ပါ။ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကနေ လှတဲ့ပုံလေးတွေကို upload လုပ်မယ်။လုပ်ပြီး
ရင် သူပြောတဲ့ အဆင့် အတိုင်းသွားပါ။နောက်ဆုံးမှာ code လေးတွေပေးပါလိမ့်မယ်။အဲဒီ code လေးတွေကို
wordpress post ရဲ့ HTML နေရာမှာ ထည့်လိုက်ပါ။ဒါဆို ရင် ကိုယ့်ရဲ့website လေးပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေ
လှလှပပဖြစ်နေတာ ကိုမြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ဥပမာ အနေနဲ့ ဒီဆိုက်ဒ် (http://smtumyanmar.co.cc/)မှာလုပ်ထားတာလေးကို ကြည့်ပါခင်ဗျာ...
ဟီးဟီး လမ်းကြုံတုန်းဝင်ဖောလိုက်ဦးမှပဲဗျို့။ ;D ;D
ကိုကရင်လေးပြောတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လဲအဲဒီဆိုဒ်ကပဲယူသုံးပါတယ်။ www.picturetrail.com (http://www.picturetrail.com)လေးက အရမ်းအရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ် ဒီဇိုင်းအသစ်အဆန်းလေးတွေနဲ့အရမ်းကိုလန်းနေပါတယ်။ ဥပမာပြမယ် ဒီမှာကြည့် - ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.picturetrail.com/samples/flicks) ၀င်ရှိုးလိုက်။ samples လေးတွေပြ ထားတယ်ဗျို့။